Sinaanta ragga iyo dumarka - Youmo
Jämställdhet - somaliska
Sinaantu waa in wiilasha iyo gabdhahu ay helaan fursad iyo xuquuq isku mid ah oo nolosha dhinac kasta ah. Sinaanta waa in wiilasha iyo gabdhahu jidhkooda go'aamiyaan iyo galmada.
Sinaantu waxay micnaheedu tahay in cid kastaa hesho xoriyad ka weyn. Cidkastaa waxay helaysaa fursad ay ku ahaato waxay doono, oo ay dareemeyso inay ka amaan badan tahay.
Wadamo badan ayaa laga wada hadlayaa sinaanta, iyadoo ay wadamo badan ay noqonayaan qaar ka sinaan badan. Laakiin wadana ilaa hadda ma aha mid sinaan buuxda leh.
Sinaantu waxay khuseysa wiilasha iyo gabdhahaba
Inta badan gabdhaha ayaa ah kuwa wax ku lumiya sinaan la'aanta. Raggu waxay dunnida leeyihiin awood ka badan iyo lacag. Laakiin raggu si kale ayay wax u lumiyaan. Wiilashu waxay tusaale ahaan leeyihiin asxaab dhow oo ka tiro yar kuwa gabdhahu ay leeyihiin, iyadoo wiilashu ay ka cimir gaaban yihiin gabdhaha. Maxaad u maleynaysaa inay taasi sababtey?
Waxa jira hadafyo siyaasadeed oo sinaanta ku lug leh
Iswiidhan ayuu baarlamaanka yidhi sinaanta ragga iyo dumarka waa muhiim. Waxa jira qorsheyaal ku sabsan sida ay bulshadu ugu noqoneyso mid siman. Qorshayaashu waxay tusaale ahaan khuseeyaan waxyaalahan:
Gabdhaha iyo wiilashu waa inay waxbaran karaan oo ay isku si lacag ugu shaqeystaan.
Gabdhaha iyo wiilashu waa inay kala qeybsadaan koritaanka carruurta iyo shaqada guriga.
Rabshadaha ragga ee ku wajahan dumarku waa inay istaagaan.
Dugsiyada, jaamacadaha iyo goobaha shaqada waa inay ka shaqeeyaan inay ahaadaan qaar siman.
Wiilasha iyo gabdhahu waa inay helaan xuquuq isku mid ah oo ku sabsan caafimaadka iyo inay helaan daryeel wanagsan.
Waxay noqon kartaa takoorid in laguula dhaqmo si ka duwan kaliya inaad tahay gabadh ama wiil. Takooridu waa sharci darro.
Dhowr tusaale oo muujinaaya inaanay bulshadu sineyn
Gabdhaha ayaa wax ka badan wiilasha guriga ka qabta sida masaxaada iyo daryeelka carruurta. Markaas ayay inta badan wax ka yar shaqeeyaan oo ay sidaas daraadeed helaan lacag ka yar iyo lacagta hawlgabka oo ka yar.
Gabdhahu waxay inta badan helaan mushahar ka yar ka wiilasha, xataa haddii ay isku waajibaad/shaqo sameeyaan.
Waxa inta badan caadi ah in wiilashu ay haystaan shaqo halkaan oo ay wax badan go'aamiyaan, sida ra’iisal wasaaraha, hogaamiyaha ganacsi ama brofessoor.
Gabdhaha ayaa inta badan lagu qiimeeyaa sida ay u eeg yihiin iyo sida ay u labistaan, marka la garab dhigo wiilasha.
Ugu dhowaad dhammaan xadgudubka galmada waxa sameeya wiilasha kaas oo ku wajahan gabdhaha iyo wiilashaba.
Wiilasha ayaa sameeya dembiyada iyo rabshadaha bulshada, kaas oo ku wajahan gabdhaha iyo wiilashaba. In ka badan oo wiilal ah ayaa loo geystaa dagaal iyo xadgudub.
Wiilasha ayaa inta badan shilal soo gaadhaan iyagoo inta badan dhibaatooyinka khamriga ama maandooriyaha yeesha. Tiro ka badan oo wiilal ah ayaa is dila/naftooda halaga marka la garabdhigo gabdhaha.
Kuwani waa tusaaleyaal tirakoob laga yaho. Tani waxay khuseysaa gabdhaha koox ahaan iyo wiilasha koox ahaan. Dabcan dhamaan kuligood iskaga mid ma wada aha. Iyadoo ay dabcan jiraan waxyaalo ay ku kala duduwan yihiin wiilasha kala duduwan iyo gabdhaha kala duduwan
Maxaaney sinaan u jirin?
Waxa jira sababo badan, oo is isku xidhan. Taas waxa ka mid ah taariikhda, in raggu ay muddo ka dheer lahaayeen awood ka badan. Taasi waxay saameysay sharciyda, dhaqamada iyo waxyaalaha kale oo wakhti ka dheer qaadan kara in la badelo.
Qeexitaanka kale waxa weeye in waxyaalaka kala duduwan sida waxa loo arko "ragg ahaan" ama "duman ahaan". Tusaale ahaan waxa aad jeclaaneyso, noocyada dareemada aad muujiseyso ama waxa aad ka shaqeynayso. Waxay noqon doontaa sida sharci aan la arkeyn oo sida gabdhaha iyo wiilashu ay noqonayaan ah.
Marmarka qaar ayaa la dareemayaa inay sax tahay inay sidaas ahaato. Laakiin marmarka qaar ayay qalafsan tahay ama qalad tahay.
Waxa loo arko ”ninimo” iyo ”dumarnimo” ayaa noqon kara qaar kala duduwan dhaqamada kala duduwan ee dunid. Iyadoo taasi wakhtiga isla badeli karta.
Sidaas ayay adiga kuu tahay?
Miyaa ay u baahn yihiin gabdhaha iyo wiilashu inay in isku mid ah shaqada guriga ka caawiyaan.
Miyaa ay tahey inay in isku mid ah wax wada go'aamiyaan, oo ay in isku mid ah dibada ku maqnaadaan?
Miyaa ay si isku mid ay u muujin karaan dareemada?
Miyaa ay gabdhaha iyo wiilashu isa-saaryaan culeys isla mid ah marka laga hadalaayo sida ay u eegyihiin iyo sida ay u labistaan?
Ka fikir sida ay tahay nolosha. Oo ka fikir sida aad adigu uga fikireyso inay wiilasha iyo gabdhahu ahaadaan. Markaa ayay ka dhib yaraan kartaa inaad adigu wax sameyso si ay uga sii sinaato. Tusaale ayaan inaad ka hadasho marka wax xaqdaro yahay.
Dhamaan "wixii jidh gabar leh" ma ahan gabdho. Dhamaan "wixii jidh wiil leh" ma ahan wiilal.
Adiga kaliya ayaa garanaayo jinsigaaga dhabta ah. Tusaale ahaan waxa aad dareemi kartaa sida gabar, laakiin waxaad leedahay qaybo jidhka ragga sida badanaaba ay leeyihiin. Laga yaaba inaad dareento si midna gabadh ama nin aan ahayn ama jinsi la’aan gebi ahaanba.
La taliye iyo tababaraha sinaanta